Indlela Yokufumana Iqela lePagan okanye iWiccan Coven
Ukukhangela isivumelwane sobuhedeni, iqela leWiccan, i- Druid grove , isizwe samaHeathen, okanye enye iqoqo efana nabantu abanomdla ekudibanisaneni nabo? Kuhle! Nazi ezinye iindlela ongayifumana.
Okokuqala, kufuneka uqonde ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zamaqela. Awuyi kuhambelana nazo zonke zazo, kwaye awuyi kuva ukhululekile kuzo zonke zazo. Akuyiyo yonke into yokuziva ukhululekile nawe.
Leyo yinxalenye yobomi, kwaye inxalenye yenkqubo yokufuna. Amanye amaqela anokufumana unamandla ongekusebenzele yona - ukuba uyindoda engumama wendlela yeCeltic, ngoko ke iqela leGrike eliQinisekisayo loLondolozo aluyindawo yakho.
Ufumana njani isiqhekeza kwindawo yakho? Sonke sinomdla wokuba siphume ngaphandle kwaye mhlawumbi kwi-Ren Faire yendawo okanye Ye Local Olde Witchy Shoppe, kwaye sihlahlela emphefumlweni okhangelekileyo onobuqili kunye nepantacle enkulu entanyeni yakhe, osibongoza ngokukhawuleza ukuba sijoyine isiqu sakhe Ngaphambili.
Nangona kunjalo, into enokuyenza kwaye kufuneka uyenze inethiwekhi kunye namanye amaPagan. Phuma kwiindawo ezidibeneyo - iibhrari, ii-psychic fairs, iziganeko ze-SCA , iivenkile zekhofi, iiklasi ze-Yoga-kwaye udibana nabanye abantu.
Ekugqibeleni umntu unokuthetha nawe ukuba bayingxenye yesivumelwano, kwaye xa beva ukuba uya kuba yinto efanelekileyo, ekugqibeleni banokuza bacele umPristi wabo oPhakamileyo (HPs) ukuba banokumema ukuya kwintlanganiso evulekile.
Ngenxa yokuba abaninzi bamaPagan kunye namaWiccans 'basesigodini se-broom ', ininzi i-covens, iitemples okanye i-groves ayithengisi ukuba khona kwayo. I-Intanethi yintloko apha - kwaye unokuba uchithe ixesha elenza ukuba wazi ukuba ufuna iqela ukujoyina. Le nkqubo isoloko ibizwa ngokuthi "ukufuna," kwaye emva kokusasaza igama lokuba nguMfunayo, unokuthi ungasondelwa liqela lendawo.
Ungakwazi ukudibana namanye amaPagan kunye namaWiccans ngokusebenzisa iiwebhsayithi zokunxibelelana, ezifana neWitchvox okanye i-Yahoo Groups - kodwa qiniseka ukufunda i-Internet Safety precautions article malunga nokuhlangana nomntu oye wadibana naye kwi-intanethi.
Iingcebiso zoNxibelelwano ezisisiseko
Amanye ama-covens anqunyelwe kubesilisa okanye ngabafazi kuphela, abanye ngokukhethekileyo baxhatshazwa ngabasetyhini, kwaye ezinye zenzelwe iintsapho kunye nezibini ezitshatileyo kwaye zingabandakanyi amalungu angatshatanga. Umnqophiso onomdla kuwo usenokuba sele ucinga ukuba unjani inani labo - ngamanye amaxesha alishumi elinesithathu kodwa ngokuphindaphindiweyo ngaphantsi - kwaye banokuxelela ukuba ulinde de umntu ahambe phambi kokuba ujoyine. Yamkela oku, uze uqhubeke. Musa ukuyithatha. Eyona ndlela, uya kukwazi ukufumana isivumelwano apho ungahambelana nawo onke amalungu akhoyo, kwaye awuyi kubakho ukungqubana kwabantu okanye ifilosofi.
Kwakhona, qaphela ukuba iqumrhu lifana neentsapho ezincinci. Abaninzi bamaWiccans basondele kwi-coven-mates yabo kunabo bazalwana babo. Kungenxa yokuba ufumene i-coven akuthethi ukuba uyamkelwa ngokuqinisekileyo. Ubulungu beConven i-street-road. I-Wiccan covens ayibambeli amalungu amatsha ngokuzenzekelayo, kwaye kungakhathaliseki ukuba unobungqina obunobungqina obunokucinga ukuba unakho, ukuba ilungu elinye lesivumelwano linenkinga nawe - elungileyo okanye cha - lingakugcina ekubeni ilungu.
Thatha ixesha lokubuza imibuzo xa kufanelekile, kwaye unokwenza isigqibo esinolwazi kwimeko apho ubulungu buhanjiswa kuwe.
Izintuthwane kwiBongo! - Idolophu yeGosa
Indlela Yokuma Umsantsa Ogqityiweyo Ekupheleni Kwe-Spring Equinox
Ukubambisana - Ubume obubalulekileyo phakathi kokuziphatha nokuQiniswa